My Blog Archives - Page2of2- Z-illumination Technology Co.,Ltd
Jabra Evolve 20 Headset (HSC016) Promotion
Happy Myanmar New Year 2018
Happy Union Day 2018
To install Cent OS 6.8
Microsoft Server 2012 R2 Installation
zippo / My Blog / No comments
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အားလုံးကို Microsoft Server 2012 R2 Install လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ more ကို နှိပ်ကြည့်ပေးပါ။ ပုံ၊ စာနှင့်တကွ ရှင်းပြထားပါတယ်။
SOHO Network Package
Our company gives many kinds of services to connect Internet and Network within home or residence and company by using network cable and wireless technology.
What is Virus???
အားလုံးကို Computer Virus က ဘယ်လိုမျိုးခေါ်တာလဲ ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင် Computer မှာ Virus ရှိနေပြီလဲ သိစေချင်လို့ ပြန်လည် Share ပေးလိုက်ပါတယ်။
Spyware is software that is usually installed on your computer without your expressed permission, which often gathers information found on your computer without your knowledge and either stores it or sends it back to someone else.
Certain forms of spyware can collect all sorts of personal information by recording keystrokes, keepingarecord of what websites you visit, collecting username and password information, bank account information, credit card information, copying files saved on your computer, or anything else that might be construed as being useful for advertising purposes or identity theft.
Install windows7with Win PE and Network
Network ကနေ Windows ကို Install လုပ်ချင်တဲ့ လူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးက တစ်ခါပဲ Win PE ကို တည်ဆောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လောက်အရေအတွက်ဖြစ်ဖြစ် Network ကနေ install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Q: ဘာကြောင့် ငါတို့ ရုံးမှာ Server တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ၊ Active Directory လိုအပ်တာလဲ။
A: ရုံးတွေရဲ့ Computer တွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ Computer တွေမှာ သုံးနေတဲ့ Data တွေ၊ Information တွေ၊ User တွေကို ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Active Directory Server တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်။ ရုံးရဲ့ Security လည်း ပိုပြီး ကောင်းသွားပါတယ်။
Active Directory ကို ပိုပြီး နားလည်အောင် အောက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Broadband Router Configuration
နာရီ အနည်းငယ်နဲ့ ပြီးရမဲ့ကိစ္စကို Japanese Language ပြသနာကြောင့် အချိန်တွေကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးလဲ အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်လည်Share ပေးတာပါ။ မြန်မာမှာလည်း ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေက အများကြီးဝင်လာနေတယ်ဆိုတော့ ဒီဘာသာပြန်ထားခြင်းက လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်အခွင့်အခါကြုံရင်လည်း ထပ်ပြီးတော့ Share ပေးပါမယ်။
Customer တွေအတွက် Infrastructure ကို ဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Infrastructure မှာ Internet Line FTTx (4M) Line, Modem, Router, Access Point (AP), NAS Storage (File Server), Network Printer, Network Copier, IP Phone, CCTV, Desktop တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးကို Knowledge ရအောင် ပြန်လည်Shareပေးထားတာပါ။ အသေးစိတ်သိချင်တာရှိရင်လည်း Comment ကနေ မေးနိုင်ပါတယ်။
Copyright © 2019 Z-illumination Technology Co.,Ltd
Designed by SMThemes.com, thanks to: http://www.vancomycin.ru, Theme.Today and dpThemes